Ukuzila – iAfrika
Ukuzilela umuntu oseshonile noma ongasekho yinto esingayisho igcwale umlomo nje ukuthi yenziwa iwo wonke umuntu, kodwa okuhlukayo indlela yokuzila leyo ngokobunhlanga, ubuzwe kanye nemizi ngokwehlukana kwayo. ITheku indawo ehlala abantu bezinhlanga ezahlukene kukhona abantu Abamnyama ngokwebala, kube Abelungu, kube amaNdiya nezinye izinhlanga njalonjalo. Zonke lezi zizwe zinezindlela zazo ezahlukene zokuzilela umuntu, ngisho nathi ke singamaZulu sinendlela yethu yokufihla kanye nokuzilela umuntu. Nezindawo esihlala kuzona futhi zenze kwehluke ukufihla umuntu kanye nokuzila. Emalokishini nje uma kuzofihlwa ingwaba limbiwa i”Grader”, emakhaya kuba izinsizwa nobaba bendawo abavuka entathakusa beyomba ingcwaba.
Ukuzila lokhu kusho ukuhlonipha umuntu ongasekho, noma ngabe usana olushonile nalo luyahlonishwa ngoba phela umuntu uyisibusiso futhi ukufika nokuhamba kwakhe emhlabeni kusho lukhulu. Ngaphambi kwezingubo nani nani bekuzilwa ngotshani, kungakafiki izindwangu bekuzilwa ngotshaini igama labo umuzi. Igama lalobu lotshani eliphelele umuzilo kwase kuphuma igama inzilo, babuphothwa benziwe into esasongo noma umgexo owuwufakwa entanyeni ukuze kukhombise ukuthi uzilile.
Kwakuzila umuzi wonke kungagcini lapho kuthiwa kuzile umnumzane noma uNkosikazi kodwa ngoba bekusuke kukhethwa lowo oyinhloko yalowo muzi oshonelwe, bekufana nokuthi uzilele umuzi wonke, yikho nje kwakubalulekile ukuthi wazeke umumo wezinhloko zekhaya, isibonelo nje Inkosana/indlunkulu, ikhohlo, iqadi njalonjalo. Ukuzila ke kuhlukile njengoba besishilo, emakhaya sikhula nje umama ubezila ngokuthi afake ingubo ephelele yokuzila akathungelwe yona emnyama ngokumbala ngoba phela usesinyameni futhi usemanzini amnyama. Bese kuthi emalokishini omakoti noma omama bakhona bona befake isiqeshana esincane sokwembatha abazila ngaso abanye kube ingubo kodwa engamnyama ngokombala. Phela kuzokhumbuleka ukuthi omakoti basesilungwini bala baphetha ukufaka ingubo ephelele emnyama yokuzila bethi iyahlambalaza futhi ibenza bazibone becwasekile empakathini lokhu okwenza yagcina iya ngokufiphala indaba yokuzila ngengubo emnyama.
Amadlozi Amagama Amakhambi Amakhaya Amalobolo Imicimbi yesintu Imishado Imithi Inhlonipho Izigodi Izilwane Izimbuzi Izindlu Izinkolelo zesintu Izinkomo Izintelezi Izinyanga Izinyoni Shembe Ukubeletha Ukudla Ukugeza Umsamo Umshado Utshwala